Learn English - ABA English 4.0.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.6 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ပညာေရး Learn English - ABA English
Learn English - ABA English ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ABA အင်္ဂလိပ်သင်တစ်ဦးထိရောက်သောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းအတွက်အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူကူညီပေးပါမည်။ ကျနော်တို့ကသဘာဝနည်းလမ်း၏အခြေခံမူအပေါ်အခြေခံပြီးစစ်မှန်သောဘဝအခြေအနေများနှင့်အတူအင်္ဂလိပ် သင်ပေး။ ယနေ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ! Start
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ABA ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်နားလည်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေမနှင့်စာရေးခြင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့်လေ့ကျင့်, လေ့ကျင့်ခန်းစကားပြောနှင့်နားထောင်ခြင်း။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဇာတိအင်္ဂလိပ်နည်းပြဆရာ ကနေအဖိုးတန်အကြံဉာဏ်ကိုရယူလိုက်ပါ။
ကို * အပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်သင်တန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်, သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအစီအစဉ်အဘို့အ sign up ကို။ သည်
ABA အင်္ဂလိပ် နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်ပုံ
✔️ ABA ရုပ်ရှင်🎬
တိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအသီးအသီးယူနစ်ကိုစတင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နေ့စဉ်အခြေအနေများတွင်အဓိကဇာတ်ကောင်များကသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရကြပါစေ။ သတိမထားမိဘဲ, သငျသညျဖျောပွခကျြမြားနှငျ့အသစ်များကိုဝေါဟာရသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
✔️ Native ဆရာ👩🏫
ငါတို့သည်သင်တို့အွန်လိုင်းမှဆရာ assign ပါလိမ့်မယ်။ သူသို့မဟုတ်သူမဒါကြောင့်သင်သင်တန်းထဲကအများဆုံးရနေ့ကတဦးတည်းအနေဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မကြာခဏသင် "ဆရာမှမက်ဆေ့ခ်ျများ" မှတဆင့်လိုအပ်အဖြစ်သင့်ဆရာမတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ပါ။
✔️ 144 သဒ္ဒါဗွီဒီယို class 🙋♀️
ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပြီးနောက်, သင် ABA အင်္ဂလိပ်ဆရာများကပြင်ဆင်ဗီဒီယိုအတန်းနှင့်အတူသဒ္ဒါကိုလေ့လာနိုငျသညျ။ အဆုံး၌, သင်အရာအားလုံးကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
✔️အင်္ဂလိပ် LIVE 🆕
သငျသညျသစ်ကိုဝေါဟာရ, အသုံးအနှုန်းတွေ, ချက်ပြုတ်နည်းများ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များရယူနိုင်အောင်အပတ်တိုင်းကျွန်တော်ပုံပြင်တွေအသစ်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ် ... လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုဆင်ခြေ။
6 level ✔️🎓
(1) Beginners, (2) အောက်ပိုင်းအလယ်အလတ်, (3) အလယ်အလတ်, (4) အထက်အလယ်အလတ်, (5) အဆင့်မြင့်နှင့် (6) စီးပွားရေး။
တိုတောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု (အကဲဖြတ်) နဲ့တစ်ဦးချင်းစီယူနစ်ပြီးအောင်နှင့်သင်သင်ယူအရာကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်တစ်ဦးအဆင့်ဖြည့်စွက်ရတဲ့အခါ, သင်အရာရှိတစ်ဦး ABA အင်္ဂလိပ်လက်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ LinkedIn တို့အပျေါမှာမျှဝေဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့!
✔️သင်နှင့်အတူလေ့လာရန်ဆန္ဒရှိ device ကိုရှေးခယျြပါ📱
သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်နှင့် / သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေသင်တန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အင်ျဂလိသင်တန်းထို့ကြောင့်ကျနော်တို့လေ့လာဖို့ပြည်ပခရီးသွားလာတဲ့အခါသင်တွေ့ကြုံခံစားသောတူညီသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုတက်ကြွလာသည်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ကြားရေးများအတွက် system ကိုဖန်တီး, သဘာဝနည်းလမ်း၏အခြေခံမူအပေါ်အခြေခံသည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုလည်းသင် TOEFL စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အမိန့်ထုတ်လုပ်မှုလေ့လာကူညီပေးပါမည်။
> နားလည်မှု> စကားပြော> အရေးအသား> ကျင့်သုံးနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လေ့လာပါ။
ABA အင်္ဂလိပ်သင်က၎င်း၏သက်သေသင်ယူမှုနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်ထက်ပိုမိုကြောင်းအနှစ် 40 '' အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအွန်လိုင်းမှအင်္ဂလိပ်အကယ်ဒမီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုတစ်ဦးအကျိုးရှိစွာက e-သင်ယူခြင်း tool ကိုကြောင်းသဘောတူသည်။
အ ABA အင်္ဂလိပ်အခမဲ့နှင့်ပရီမီယံကျောင်းသားများကိုများအတွက် App ကိုသင်သင် ABA အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပရဝုဏ်အဘို့အသုံးပြုအကောင့်တစ်ခုတည်းအတွက် log လျှင်သင်ပြီးသားရာ၌ခန့်ထားပြီတိုးတက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အခမဲ့ option ကို (ABA အခမဲ့) နဲ့ 144 ကဗီဒီယိုအတန်းအားလုံးလိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနှင့်အတူသငျသညျများကိုပေးစွမ်းအဆိုပါအကယ်ဒမီရဲ့ဇာတိဆရာ, ဆရာမများကရှင်းပြသည်။ သင်တို့သည်လည်းအခမဲ့အဆင့်တိုင်း၏ပထမဦးဆုံးပြီးပြည့်စုံသောယူနစ်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင် ABA အင်္ဂလိပ်သင်ယူမှုနည်းလမ်းထွက်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
အဆိုပါပေးဆောင် option ကို, ABA ပရီမီယံနှင့်အတူသင်ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်းအနေဖြင့်အားလုံးပါဝင်သောအကြောင်းအရာရယူနိုငျသညျ, အသီးအသီးအဆငျ့များအတွက်လက်မှတ်ရဖို့သင်စေခြင်းငှါမဆိုမေးမြန်းချက်နှင့်အတူ ABA အင်္ဂလိပ်ကျောင်းပရဝုဏ်မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်သူအင်္ဂလိပ်ဆရာထံမှထောက်ခံမှုရရှိကြသည်။
ယင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီဖျက်သိမ်းမပေးလျှင် * အားလုံး subscriptions ကိုအလိုအလျှောက်, သက်တမ်းတိုးပါလိမ့်မည်။ သည်
ABA အင်္ဂလိပ် Download အသစ်တစ်ခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်းကိုစတင်ပါ။ သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ!
Learn English - ABA English အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Learn English - ABA English အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Learn English - ABA English အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Learn English - ABA English အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 157.57k 62.19M
Learn English - ABA English ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Learn English - ABA English အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.0.6
ထုတ်လုပ်သူ ABA English Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.abaenglish.com/en/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: CC:C2:1D:C0:A3:46:93:88:AD:8C:22:8E:D0:AA:88:8C:6E:14:5B:E4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Javier Figarola
အဖွဲ့အစည်း (O): ABA English
Learn English - ABA English APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ